माया के हो? | इनाम पुरस्कार | प्रेम, यौन र इन्टरनेट
सम्बन्ध माया के हो?
प्रेम, अरूलाई मायालु वा मायालु बनाइन्छ, हामीलाई जोडिएको, सुरक्षित, पूरा, पोषित, भरोसा, सरेनन, जीवित, रचनात्मक, सशक्त र सम्पूर्ण महसुस गर्दछ। यसले कविहरू, सङ्गीतकारहरू, कलाकारहरू, लेखकहरू र धर्मशास्त्रहरूलाई हजारौं वर्षसम्म प्रेरित गरेको छ। तर प्रेम के हो?
यो सबै मा सबै भन्दा आधारभूत भावनात्मक बल हो। यसको विपरीत डर छ, जुन धेरै रूपहरु मा रिस, शोषण, ईर्ष्या, अवसाद, चिन्ता र यति देखाउँछ।
थप प्रेम खोज्न, यो वास्तव मा सम्बन्ध को यौन सम्बन्ध र प्रेम को सम्बन्ध मा मदद गर्दछ, दुई अलग द्वारा निर्मित गरिन्छ, तर दिमाग मा लिंक्स सिस्टमहरु। हामी साथीलाई बाँड्न सक्छौं तर यसको लागि यौन इच्छा छैन। हामीले बिना कुनै व्यक्तिलाई यौन इच्छा राख्न सक्दछौं। इच्छा र सम्बन्ध दुवैको स्वस्थ सन्तुलन एक दीर्घकालिक, खुसी, यौन सम्बन्धको लागि उत्तम आधार हो। दुवै प्राकृतिक पुरस्कार हुन्।
प्राकृतिक वा प्राथमिक पुरस्कार भोजन, पानी, यौन, मायालु सम्बन्ध र नवीनता हुन्। तिनीहरू हामीलाई जीवित र पक्कै दिन्छन्। यी पुरस्कारहरू खोज्दै न्यूरोकोमिकल डोपामिन मार्फत इच्छा वा भूखको द्वारा उत्प्रेरित गरिन्छ। प्राकृतिक इनामहरूले खानेकुरा, पिउने, किरण, र पोषण गर्दा हामी खुशीको भावना दिन्छौं। यस्तो आनन्दित भावनाहरूले व्यवहारलाई अझ बलियो बनाउँछ ताकि हामी यसलाई दोहोर्याउन चाहन्छौ। सामान्यमा दुखाइ, विशेष गरी यदि लामो समय सम्म, हामीलाई टाढा राख्छ। हामी कसरी सिक्न सक्छौं। प्रजातिहरूको जीवितताको लागि यी व्यवहार प्रत्येक प्रत्येक आवश्यकता छ।
पोर्नोग्राफीले हाम्रो भूख यौन सम्पर्कको लागि, विशेष गरी किशोरहरूमा समय अवधि मा धेरै इन्टरनेट अश्लील को उपभोग गर्न अवसाद र पनि हुन सक्छ लत केहि मानिसहरू मा। हाम्रो दीर्घकालीन सुअवसरको लागि स्थिरता कसरी प्रेम गर्ने सिक्नु हो।
यहाँ हामीलाई प्यार महसुस गर्ने मुख्य न्यूरोकोमिकलका प्रकार्यलाई बुझ्न एक द्रुत र सजिलो मार्गदर्शक हो। तपाइँको पहिलो चुम्बन सम्झनुहोस्?
प्रेमको रूपमा प्रेम >>